सेक्स गर्ने महिलालाई फाईदै फाईदा, यस्ता छन् सेक्सको फाइदासेक्सको ११ फाइदा यस्ता छन्
Posted: 2018-05-30 20:36:33
एजेन्सी ।-सेक्स गर्ने महिलालाई फाईदै फाईदा हुने एक अध्ययनले देखाएको छ । महिलाहरुले यौन सम्पर्कका समयमा अत्यन्त आनन्द प्राप्त गर्ने गरेको पनि देखिएको छ । अध्ययनमा पुरुषलाई भन्दा बढी आनन्द महिलालाई हुने गरेको देखिएको छ । अध्ययनका अनुसार सेक्सले बिभिन्न किसिमका मानसिक तथा शारीरिक फाईदा पनि हुन्छ । यौन सम्पर्कले महिलाहरुको शारीरिक संरचनामा समेत परिवर्तन आउँदछ । यौनसम्पर्कका समयमा सेक्स पार्टनरबाट प्राप्त भावनात्मक सहयोगले महिलाहरुमा आत्मविश्वास बढ्दछ ।
यौन सम्पर्कको चाहना हर समय हुने भएपनि रजस्वला सकिएको ५ देखि ७ दिनसम्म महिलाहरुमा यौन भावना ज्यादा हुने गर्दछ । मासिक चक्र पुरा भएपछि सेक्स हार्मोन सक्रिय हुने गर्दछ । महिनावारी भएको पाँचदेखि सात दिनमा गरिएको यौनसम्पर्कले १२ दिनसम्म महिलाहरुमा आनन्दको अनुभूति गराउँछ ।
तपाईँहरुले पनि थाहापाई राख्नुहोस् महिलाहरुलाई यौन सम्पर्कले के कस्ता फाइदाहरु हुने गर्दछ ।
यौन सम्पर्क एक शारीरिक व्यायाम हो, जसले हामीलाई स्वस्थ राख्दछ । यौन सम्पर्कको समयमा महिलाहरुमा क्यालोरी वर्न हुन्छ र तौललाई सन्तुलनमा राख्न सहयोगी हुने गर्दछ ।
यौन सम्पर्कले महिलाहरुलाई उन्मुक्त अनुभूत गराउँछ जसले जीवन प्रक्रियालाई सहज बनाउन मद्दत गर्दछ ।
यौन सम्पर्कले बिभिन्न किसिमका रोगहरुको संक्रमणलाई कम गर्दछ र स्वस्थ्य रहन मद्दत गर्दछ ।
यौन सम्पर्कले रक्तचापलाई पनि सन्तुलनमा राख्न सहयोगी भूमिका निभर्वाह गर्दछ ।
यौनसम्पर्कमा नजोडिने महिलाहरु भन्दा हप्तामा २ या २ भन्दा बढी पटक यौनसम्पर्क गर्ने महिलाहरुमा मुटुसँग सम्बन्धीत रोग लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ ।
महिलाहरुमा आत्मसम्मानलाई बढाउन पनि यौन सम्पर्क जरुरी हुन्छ ।
यौन सम्पर्कले आन्तरिक तरंगलाई सक्रिय गराउन तथा बैबाहिक जीवनलाई सुखमय बनाउन सयेग गर्दछ ।
जोर्नी तथा टाउको दुख्ने समस्यालाई केहीहदसम्म कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
क्यान्सर र मुत्रथैलीसँग सम्बन्धीत समस्याको प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बढाउन पनि यौनसम्पर्कले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।
यौन सम्पर्कले महिलाहरुको पेल्भिक मांशपेशीलाई बलियो बनाउँछ । पेल्विक मांसपेसीको व्यायामले पिसावमा हुने अनियमिततालाई कम गर्दछ ।
आरामदायी निन्द्रामा लागि पनि महिलाहरुलाई यौन सम्पर्कको आवाश्यक्ता पर्दछ ।
Posted: 2018-07-05 15:20:34
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं- प्रायः यौन सम्बन्ध सबैभन्दा निकटका व्यक्तिसँग हुन्छ । आनन्ददायी सम्बन्धका लागि कुनै पनि यौनजोडी शारीरिक र मानसिक रुपमा सम्बन्धका लागि तयार हुन आवश्यक पर्छ । यौन शिक्षाको अभावमा मन मिलेका जोडी बीचको सहवास पनि सुखद् हुन सक्दैन । स्खलन हुनु मात्रै सन्तुष्टि हैन । यस्तो बेलामा यौन साथीमध्ये एक जना तृप्त हुने र अर्को प्यासै रहने समस्यासमेत देखिन्छ । ...
रुस जित्दा वाग पनि चर्चित...
Posted: 2018-07-03 10:04:51
सुनाखरी न्युज/ मस्को - रुसमा विश्वकप शुरु हुनु भन्दा अगाडि एक प्रतियोगिता चलाएको थियो । जसको नाम थियो रसियन हटेस्ट वाग (वाइफ एण्ड गर्लफ्रेन्ड) । यानि की फुटबलरका श्रीमती र गर्लफे्रन्ड । प्रतियोगितामा रुसका स्टार फुटबलरको फोटो जारी गरेको थियो । ...
विश्वकै ’हटेस्ट’ महिला बनिन् प्रियंका चोपडा
Posted: 2018-07-01 07:13:46
सुनाखरी न्युज/ एजेन्सी– बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा विश्वकै हट महिला २०१८ घोषित भएकी छन्। बेलायतबाट प्रकाशन हुने ‘म्याक्सिम’ म्यागेजिनले तयार पारेको विश्वका सय हट महिलाको सूचीमा प्रियंकालाई पहिलो नम्बरमा राखिएको छ। सन् २००० की विश्व सुन्दरी उनी यसअघि ४ पटक हटेस्ट महिला घोषित भइसकेकी छिन्। ...
तपाइँलाई थाहा छ ‘सेक्स’ गर्न छोडेमा शरीरमा कस्तो असर पर्छ ? हेनुहोस्
Posted: 2018-07-01 07:00:07
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं- मानव शरीरमा सेक्सपछि धेरै खालका परिवर्तन आउछन, जस्तै हर्मोनमा, मनोवृत्तिमा परिवर्तन वा कम्मरको नापमा परिवर्तन । यति मात्रै होइन, सेक्सको माध्यमबाट लामो आयु पनि हासिल गर्न सकिन्छ पनि भनिन्छ । तर, जसरी सेक्सपछि शरीरमा परिवर्तन आउँछन्, त्यसरी नै जब तपाई सेक्स गर्न छोड्नुहुन्छ, तब पनि केही समयसम्म तपाईमा शारीरिक परिवर्तन देख्न सक्नुहुन्छ । जान्नुहोस् के–कस्ता परिवर्तन अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ । ...
Posted: 2018-06-30 09:34:30
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौ — डेटिङ । युवायुवतीलाई एकअर्कासँग नजिक्याउने माध्यम । पार्क वा यस्तै एकान्तमा घुम्दै एकअर्कालाई बुझ्ने अवसर दिन्छ यसले । डेटिङमा जान कुनै मन मिल्ने साथीको खोजीमा कोही छ कि ? प्रविधि हाजिर छ, सहयोगका लागि । पछिल्लो समय डेटिङमा प्रविधिले सघाउन थालेको छ ।...